Mashiinka goynta Laser - WUHAN GOLDEN LASER CO., LTD.
Mashiinnada laser-ka sare ee CO2 ee goynta sare, qorista iyo calaamadeynta alaabada birta ah.
Cutubka Mars ee Laser Cutter
Mashiinka Laser ee Dharka
Mashiinka Laydhka ee maqaarka
Mashiinka goynta goynta fiber-ka waa mid la awoodi karo, oo si sahlan loo isticmaali karo, iyo qalab goynta birta ah oo kaa caawin kara inaad bilowdo ganacsi cusub oo bilow ah ama kordhinta faa'iidooyinka shirkaddaada sida fiican loo aasaasay. Ugu badnaan dalbo warqad bir ah & tuubbo bir ah.
Sheet & Tube Laser Mashiinka goynta
Mashiinka goynta 3D Robot Laser
Codsiga Laser-ka CO2 ee Qeybta birta
Xiro Lebis & Dharka Ciyaaraha
Codsiga Fiber Laser ee qaybta Birta
Golden Laser waxaa ka go'an inuu bixiyo xalka codsiyada laser dijital ah, otomatik ah iyo caqli leh
si looga caawiyo nidaamyada soosaarka warshadaha dhaqameed casriyeyn iyo horumarin hal-abuur leh.
GOLDEN LASER waa shirkad soo saarta mishiinnada laser adduunka oo dhan iyadoo si joogto ah u horumarinaysa badeecadeena isla markaana adeegsanaysa teknolojiyadda sareysa.
> Baro mashiinnada leysarka
GOLDEN LASER wuxuu ku siinayaa mashiinnada laser-fasalka koowaad oo leh hal hadaf oo kaa dhigaya inaad ka sii faa iideysato. Xalkeenna laser-ka ayaa kaa caawinaya inaad kordhiso wax soo saarka iyo qiimaha wax soo saarkaaga.
> Soo ogow dalabkayaga laser-ka
GOLDEN LASER wuxuu aasaasay shabakad adeeg suuq geyn oo bisil in kabadan 100 dal iyo gobolada aduunka oo dhan.
> Ka akhriso wax dheeraad ah oo ku saabsan LASER GOLDEN
Injineerada loo heli karo mashiinnada adeegga.
Caawinta khadka tooska ah iyo fiidiyowga.
Rakibida Goob, Guddi iyo tababar.
Dayactirka iyo dayactirka gudaha.
> Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan taageerada adeegga
Wararka & Blog